Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Gaalkacyo ka Dhoofay – Radio Daljir
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Gaalkacyo ka Dhoofay
Seteembar 19, 2015 6:18 b 0
Sabti, September 19, 2015 (Daljir)_ Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Wefti Ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa maanta oo taariikhdu tahay 19-09-2015 u ambabaxay Magaalada Muqdisho.
Weftiga uu hoggaamiyanayo Madaxweynuhu waxaa kamid ah Wasiirada Waxbarashada, Deegaanka, Shaqada iyo Shaqaalaha, Wasiir kuxigeenada Maaliyada iyo Qorshaynta iyo Wasiirudawlaha Madaxtooyada iyo xidhiidhka Gobollada iyo Wasiirudawlaha Caafimaadka iyo Xubno katirsan Golaha Wakiillada ee Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa warfidiyeenada u sheegay intaanu kadhoofin Garoonka diyaaradaha ee Cabdulaahi Yuusuf Airport ee Magaalada Gaalkacyo Inuu ujeedka socdaalkoodu yahay kaqayb galka Madasha Wadatashiga Soomaaliyeed oo muqdisho kafurmaya.
“waxaan u ambabaxaynaa magaalada xamar oo aanu kaga qayb geleyno shirka madasha wadatashiga soomaaliyeed, waxaan kaloo rabaa inaan sheego shirka kaqayb galkiisa micnihiisu maaha Puntland mowqifyadeedii ay aaminsanayd inay katanaasulayso dabcan soomaalaa isu imaanaysa waxa ay qabto Puntland-na Madasha ayay kajeedineysaa” ayuu yiri madaxweyne Gaas.
“Dabcan waxaan shacabka Puntland u cuntamin shirka kasoo qaadi mayno qorshahayagu waxa weeyaan in mowqifka Puntland cadyahay Soomaalina u cadyahay beesha caalamkana u cadyahay” sidaasi waxaa yidhi madaxweyanaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Shirkan ayaa maalinta burrito ah kafurmidoona magaalada muqsisho waxaana kasoo qaybgeleya Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali, Madaxweynaha Dawladda Federaalka , Ra’iisul wasaaraha Dawladda Federaalka , Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Jubba-Land iyo Hoggaamiyaha Maamulka kumeel-gaarka ahe Koonfur-Galbeed Soomaaliya waxaana uu socondoonaa oo muddo dhan hal maalin oo keliya.